Polar weather, olee otu ọ dị? Kedu ihe ala pola bụ? Chọpụta ya ebe a! | Netwọk Mgbasa Ozi
Ever nwetụla mgbe ị na-eche kedu ka ihu igwe dị? Anyị maara na ọ dị oyi, na ihu igwe kpuchie na snow maka ọtụtụ afọ, mana… gịnị kpatara nke a? Kedụ n'ezie okpomoku pekarịsịrị pekarịa ma ọ bụ karịa nke edere na ebe ha nwere ụdị ihu igwe a?
N’ịpụrụiche a, aga m agwa gị ihe niile gbasara polar weather, Ọ kacha jụụ n’elu ụwa.
1 Njirimara nke ihu igwe
2 Ihe nlele nke onodu ubochi pola
3 Ebee ka ọ dị?
4 Pesdị ihu igwe polar
5 Ihu igwe na Antarctica
6 Ihu igwe na Arctic
7 Polar osisi
Njirimara nke ihu igwe
Ejiri ihu igwe polar nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe niile okpomọkụ dị n'okpuru 0ºC, inwe ike ibata ruo -93ºC (na North Pole), ebe ụzarị anyanwụ na-abata nnọọ n'ihe gbasara mbara ala. Mmiri mmiri ozuzo dị ụkọ, iru mmiri ahụ dị oke ala ma ikuku na-efe na ike dị ukwuu ruru 97km / h, ya mere ibi ebe a fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe na-agaghị ekwe omume (ọ bụ ezie na, dị ka anyị ga-ahụ n'okpuru, e nwere ụfọdụ anụmanụ na osisi ndị jisiri ike imeghari na gburugburu ebe obibi ọjọọ).
Anyanwụ n’osisi na-awa n’enweghị nsogbu maka ọnwa isii (mmiri na ọkọchị). Ọnwa ndị a mara site na aha »Larbọchị pola». Ma na isii ndị ọzọ (mgbụsị akwụkwọ na oyi) ọ na-anọgide na-ezo, nke mere na ọ maara dị ka »Abalị".
Ihe nlele nke onodu ubochi pola
Climograph nke Svalbard, nke di na Arctic Glacial Ocean
Iji nwetakwuo echiche doro anya banyere ọnọdụ ihu igwe dị na mpaghara ụwa ndị a, ka anyị were ugwu ugwu nke Svalbard dị ka ihe atụ, nke bụ agwaetiti dị na Arctic Glacial Ocean. Ọnwa kacha zoo mmiri bụ Ọgọstụ, na-ada ihe dịka 25mm, na nke kachasi ike bụ Mee, na-ada ihe dịka 15mm; nke kachasị sie ike bụ June, na ọnọdụ okpomọkụ nke 6-7ºC, na Jenụwarị nke kachasị oyi, yana -16ºC.
Na ụwa therewa enwere nnukwu mpaghara abụọ jụrụ oyi, n'etiti 65º na 90º ugwu na latitude latitude, ndị bụ Ugwu Ugwu na South osisi. Na nke mbụ, anyị na-ahụ Arctic Circle, na nke abụọ, Antarctic Circle. Ma na mpaghara ugwu ndị ọzọ dị elu, dị ka nchịkọta nke Himalaya, Andes ma ọ bụ ugwu Alaska, enwere ihu igwe dị ka nke polar, nke mere na-etinyekarị ha na nnọchi anya ala nke polar.
Pesdị ihu igwe polar
Ọ bụ ezie na anyị nwere ike iche na enwere naanị otu ihu igwe polar, n'eziokwu, e kewara ya abụọ:
Tundra: ọ bụ nke ahịhịa anaghị eto nke ukwuu; ọtụtụ bụ obere ahịhịa. Ka anyị na-abịaru nso gburugburu polar, anyị na-ahụ mbara ala nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ obere osisi. Osisi na anumanu di iche iche bi ebe a, dika pola bear.
Akpụrụ ma ọ bụ glacial: kwekọrọ na elu karịrị 4.700m. Ọnọdụ okpomọkụ dị oke ala: mgbe niile n'okpuru ogo 0.
Ihu igwe na Antarctica
Edere ụkpụrụ okpomọkụ dị oke ala na Antarctica. Ọnọdụ ihu igwe na-adị na mpaghara ndị dị n'ụsọ oké osimiri na mpaghara Antarctic, na ọnọdụ okpomọkụ n'oge ọnwa ọkọchị bụ ogo 0, na n'oge oyi, opekempe nwere ike ịdaba -83ºC, na ọbụna karịa. Ogologo okpomọkụ kwa afọ bụ -17ºC.
Ọ naghị enweta ụzarị ọkụ dị ukwuu, yana, ihe ruru 90% nke ya bụ site na ice, si otú a na-egbochi elu ikpo ọkụ. N'ihi nke a, Antarctica a na-akpọ "friji ụwa."
Ihu igwe na Arctic
Ihu igwe na Arctic dị oke oke, ma ọ bụghị oke dị ka Antarctic. Winters dị ezigbo oyi, yana okpomọkụ nwere ike ịda na -45ºC, ọbụnakwa -68ºC. N'oge ọkọchị, nke na-ewe izu isii ma ọ bụ izu iri, ọnọdụ okpomọkụ na-atọ ụtọ karị na 10'C.
Iru mmiri dị oke ala, belụsọ n’oge ọkọchị n’akụkụ mmiri. Okpomọkụ afọ ndị ọzọ nke afọ dị ezigbo oyi, mmiri na-agbazekwa obere mmiri. N'otu aka ahụ, mmiri ozuzo dị nnọọ ụkọ, akpan akpan ke ini etuep.
Ihe ejiri mara pola flora bu ihe pere mpe. Ifufe na-efe ike dị ukwuu, ya mere ọ dị mkpa ịnọ nso ala ka enwere ike. Ma ọ dịghị mfe, ebe ọ bụ na ọ na-ada oyi fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ niile. N'ihi ya, osisi ndị ahụ enweghị ike ịlanarị, yabụ, amalitela ịchị obere ala nke ahịhịa nwere ike ibi Mosis, lichens y sikrob.
Enwere ike ịchọta ahịhịa na tundra, ebe ọ bụ na n'ọzara ọcha nke mpaghara glacial ọnọdụ ndị ahụ adịghị adabara ndụ.
Ihe eji mara polar poun nwere oke mkpa iji chebe onwe ya pụọ ​​na oke oyi. Iji mezuo nke a, ha ewerela ụdị dị iche iche, dịka ọmụmaatụ: enwere ụfọdụ ndị nwere akwa dị ukwuu ma na-agbakọkwa abụba subcutaneous; enwere ndị ọzọ na-arụ ọwa mmiri ma ọ bụ veranda n'okpuru ala, nwekwa ndị ọzọ na-ahọrọ ịkwaga.
N'etiti ụmụ anụmanụ na-anọchite anya anyị nwere polar bea, nke bu anumanu anumanu kacha ukwuu na Arctic, ihe wolf, nke musk ehi, ma ọ bụ ewu snow. A na-enwekwa anụmanụ ndị dị n’ime mmiri, dịka akàrà, Anụ ọhịa wolf, ma ọ bụ sharks, dị ka Microcephalus nke Somniosus nke na-eri pola bea.
Na nke a anyị na-eme. Kedu ihe ị chere gbasara ozi gbasara ihu igwe?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Climatology » Oke ihu igwe
nke ahụ bụ nsonaazụ zuru oke ekele
Zaghachi wendy ana gonzalez
Nke a dị ịtụnanya m jisiri ike nweta ihe niile m chọrọ
Ọ dị mma mana ọ bụghị ihe m na-achọ.
Kedu ihe bụ biosphere?